I-Rosebud Cottage--I-Cozy Cottage emiswe kwiPines
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDan & Joyce
IRosebud yindlwana epholileyo netofotofo ebekwe kwipayina enofikelelo olukhawulezayo eWallowa Lake kunye nazo zonke izinto ezinomtsalane oza kuzihlola. Uya kuyithanda imfihlo kunye nokuzola, indawo yomlilo, indawo ebanzi, ikhitshi egcweleyo kunye nesakhiwo sokudlala sabantwana kwipropathi. Le yinkampu ethandekayo yokuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-6 kunye nenja yakho.
-Igumbi lokulala 1: Ibhedi enkulu
--Igumbi lokulala 2: Ibhedi enkulu
--Fihla-ibhedi kwigumbi lokuhlala
--Iziko elivuthayo kwigumbi lokuhlala
--Ikhitshi igcwele yonke into oyifunayo ukuze ulungele ukutya okumnandi
-Idesika enkulu yangaphandle, ifanelekile kwi-BBQing kunye nokubukela izilwanyana zasendle
--Indawo yokudlala yabantwana ukugcina abancinci bexakekile
--Igcwele ngokupheleleyo kwaye icocekile ngokungenachaphaza
Isitrato sethu esithe cwaka yindibaniselwano egqibeleleyo yabucala ethe cwaka, nokufikelela ngokukhawuleza kuzo zonke izinto eziluncedo eWallowa Lake. Uya kusithanda isibhakabhaka esimnyama, isantya esithambileyo somlambo okufutshane, kunye nehlathi elishinyeneyo lompayini le ndlu ihleli kuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Dan & Joyce
Sitsalela umnxeba ngokukhawuleza ukuba unayo nayiphi na imibuzo, kwaye abaphathi bezindlu zethu bakwishishini kwimeko yazo naziphi na iimeko zikaxakeka. Ukuba ufuna uncedo okanye unemibuzo, vele ubuze!